नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरमबीच एकता गर्न संयोजन समिति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरमबीच एकता गर्न संयोजन समिति
काठमाडौं — नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालबीच पार्टी एकताका लागि डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र अशोक राई रहेको 'पार्टी एकता संयोजन समिति' गठन गरेको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट जारी गरिएको बिज्ञप्तीमा दुबै पार्टीका तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरी विभिन्न चरणका वैठकहरुमार्फत पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति, सिद्धान्त, विचार र संगठनात्मक प्रणाली समेतमा समान दृष्टिकोण बन्दै गएको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ‘पार्टी एकता संयोजन समिति’गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिले वर्तमान आन्दोलनमा कार्यगत एकताको माध्यमबाट सहकार्य गर्दै पार्टी एकताको कार्यलाई यथाशीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने सहमति गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ १६:४५
जलेर १६ महिनादेखि थलिएका राउटे ट्रमा सेन्टरमा भर्ना
वैशाख ८, २०७४ फातिमा बानु
काठमाडौं — आगोले जलेर १६ महिनादेखि थपिएका राउटे कपिल शाहीलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टरमा भर्ना गरिएको छ । गत वर्षको पुषमा आगो ताप्ने क्रममा २० वर्षीय कपिल जलेर घाइते भएको उनका पिता कपिल राउटे मुखिया वीरबहादुर शाहीले बताए । घाइते शाही अछामको भैरवस्थान हुन् ।
बेल्जियमका डाक्टर लुक बुकुरसहितको टोलीले राउटे शाहीलाई उद्दार गरी बिहीबार काठमाडौं ल्याएको उद्दार टोलीका सदस्य लोक दाहालले बताए । उनलाई राउटे उत्थान प्रतिष्ठान र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनको पहलमा उपचारको लागि काठमाडौं ल्याइएको हो ।
शाहीको अवस्था अहिले निकै गम्भीर रहेको उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर अपाल लामिछानेले बताए । आगोले पोलेर शाहीको पाखुरा, ढाड र पेटका भागमा घाउ भएको छ ।
राउटे समुदायले झारफूक र जडिबुटी उपचारमा मात्रै विश्वास राख्ने भएकोले लामो समयसम्म शाहीको अस्पतालबाट उपचार हुन नसकेको राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले बताइन् । ‘बल्लबल्ल फकाएर यहाँसम्म ल्यायौं’, अधिकारीले भनिन्,‘ उपचारको लागि अस्पताल जान मान्दैनन् ।’ घटना भएको दिनदेखि नै कपिल उठ्नै नसक्ने गरी ओछ्यान परेको उनका पिताले बताए ।
प्रारम्भिक अवस्थामा रगत र मृगौला जाँचेर हेर्दा भने अवस्था सामान्य रहेको डा. लामिछानेले बताए । शाहीको उपचार गर्न लामो समय र धेरै खर्च हुने लामिछानेको अनुमान छ ।‘ आजैबाट शल्यक्रिया शुरु हुन्छ, धेरैवटा शल्यक्रिया पश्चात मात्रै केही भन्न सकिन्छ’, उनले भने ।
सरकारले लोपोन्मुख जातिको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शाहीको उपचारका सम्पूर्ण उपचार खर्च अस्पतालले निशुल्क गर्ने ट्रमा सेन्टरका डा.पियुष दाहालले बताए ।